トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Qwalasela phawu-mkhwa pa parlour [Horukon Set Operations]
Xa abaninzi abantu baya kudlala elibe pa, ndiyacinga ukuba ukukhangela data kwi isibane data. Ukuba ngaba ujonge data, apho eqongeni koko uhlobo yokumpompoza, angazi kunyuke nge. isibane kwedatha ulwazi data lwabathengi. Ngendlela efanayo nale, siye nomatshini kwakhona evenkileni endaweni isibane data.
pa parlour kunye Horukon, sele zilawulwa umatshini leyo kuthiwa ikhompyutha ivenkile ngokusesikweni idatha yonke. Ethetha izinto ezibonakala Horukon, ukuthetha ngomnye kwetafile yemali, inani umzila kunye inombolo jackpot amaxesha imali ifakiwe kwenye, yaye, ukuba oko kuphuma ngesantya kangakanani, sele ukusivumela up de data ibizwa ngokuba uqhekeko kumatshini kuwe.
ezinye nabo, yaye ngamnye iinkcukacha aggregate kunye neevenkile yonke idatha aggregate ukuba siqithi ngasinye, kufuneka uphathe ngokuchanileyo ezahlukeneyo data.
Horukon, ngoko kufuneka ukwandisa idatha echanekileyo, ngenxa bobukho bayo, kwicala pa parlour, ukubhaqwa kwaye ukusilela yima Ukufunyanwa Goto isenzo, naye, kwaye kananjalo khangela iingxaki ezifana kweentambo ingaphandle mna. Ezitalatweni
, okanye ndabeka indlela capture leyo kuthiwa Horukon kuthinjwe. Eneneni, kubonakala ngathi kukho kwakhona iqela Horukon ukuba isenzo esinjalo kunokuba. Kulungile oko kuthiwa lokufakwa eholweni conserver, leyo kuthiwa ikwabizwa ngokuba win ingqiqo umkhwa lo Horukon. Ngokuhambelana kunye ukutshintsha
yokudlala kwaye linokuba ukuba imeko evenkileni, oko kuthiwa lo msebenzi ungenziwa. Ekubeni Horukon kwakhona umatshini, nina uphuma yinto ebizwa ngokuba umkhwa loo matshini.
Ngokomzekelo, oko kudla ekubhekiselwe kuwo, ukuze ubonise Toka jackpot yi ivolibholi zonke single, ukuze ibhola ngaphandle iphumile, iimoto ezimbalwa siqithi nganye, ndibeke ibhola okanye, kakuhle kuphela itheyibhile kwikona yi Toka hit, ekupheleni inani, oko kuthiwa ukuze bakwazi okanye ukukhululwa ngabom intlawulo iqela elithile.
uza kubamba loya ngayo Horukon indlela bamba.
_x000D Kwi _, okanye ukubona apho ngokukodwa ke xa usenza Horukon cheats?
Horukon ayenzelwanga ukuba ukunyenyisa omnye enye imali ezicukucezwe zancinane, kuthiwa anokuthi ilawulwe ukuze mali ngamnye kwizizukulwana ezininzi.
Kakade ke, njengokuba, iiyunithi ezifana emihlanu ukususela ekupheleni isitora kwi qela, kwaye oku kudala ubunzima elula ezinjalo, kuba loo nto ibitheni ngokucacileyo ukucinga, okanye nidlobe njengeenkunzi enye, Kakudai okanye okanye, yahlulwe inombolo kumatshini nganye, zonke iziqithi, njalo njalo, kukho ipateni kwivenkile ezahlukeneyo. Xa ubona kulo, kwenyusa amathuba ukufumana ukuma okuqinileyo.
Horukon nayo weva intetho kungaba ezifana ukukhulula ibhola ngaphandle kuphela ngexesha elithile. Yintoni edla ukuzama ukukhulula intlawulo ivenkile yayo nayiphi izowuni yexesha, usenokuba kuqalisa umdlalo ngokuya elide. Umzekelo, usebenzo kummandla lexesha ukuba incopho, ezifana nawe sisenokugcina ukuba ufuna isikhalazo kwezinye abathengi ukukhulula intlawulo, kusasa, yaye angene kwindawo ixesha elincinane abaphulaphuli, ngokukhetha ivame ke ngokupheleleyo ibali kunokwenzeka kangangoko kunokwenzeka.
okanye ukuqhubeka womelezwa mini lweveki, umhla nexesha
zone, ungafaka mkhwa ephuma kuloo ukuba baligcinile ngenyameko. Kwabe phambi okanye mnandi kakhulu, ukuze ngaloo okanye limnandi ngcono evekini. Nceda zama ukubona iimpawu evenkileni ukuba ukho kuzo.
Horukon indlela capture kukuba iingenelo neengozi wahlulelana yedwa, Abanye abantu bacinga ukuba usebenzisa inani iivenkile, kukho abantu abayi asebenzise into enjalo. Bendiya kuthi mhlawumbi, ngu dibanisa malunga Horukon indlela bamba. Ngaphandle okanye embi Horukon ulungile, ngokucacileyo itafile ethile, kuphela kwesiqithana esithile, ngokuba ndibona isimo ngemali yaye kuphela ngamaxesha athile le mini. Nangona
yokungcakaza, pa ivenkile uyazi Musa ukuyeka ukukhupha lokuzingela inzuzo.
Kwakhona, xa usenza uhlobo oluthile lomsitho (umzekelo :! Eva ulamlo kakhulu), ngokwenene kuphela uhlengahlengiso iinzipho, okanye uya kuba nako wokuphilisa i noEva eso siqithi? Kungakhathaliseki ukuba iinzipho Gabagaba, ngubani na ukuba awufuni ukuba ukuvula xa ecacileyo kakhulu kubonakala; Ngoko ukuba uxele ukuba, yimani onjalo amathuba hit omkhulu 1/400 kukuthi, baya kuba nako ukwenza superimpose a lula jackpot oko iiyunithi UGA?
kusele lokuvala isiganeko esinjalo, kufuneka uqaphele ukuba ukujonga Unikimbie data. Ngaba ngokucacileyo Umyeni enkulu hit lilonke buphakame. Loo nto yinto mihla. Endikulo Ngoko malunga kangangoko Horukon indlela ethile capture, ayikho phaya isimo esihle.